စက်ရုပ်များ မှန်ကြည့်တတ်လာခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » စက်ရုပ်များ မှန်ကြည့်တတ်လာခြင်း
Posted by Mr WorldWide on Feb 11, 2013 in Science & Religion, Sciences & Resources |4comments
စက်ရုပ်သည် မှန်ထဲတွင် လူသားကဲ့သို့ မိမိကိုယ်မိမိ ပြန်လည်မှတ်မိနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟု သင်တွေးမိ ပါသလား။ စက်ရုပ်နည်းပညာ တိုးတတ်လာမှူသည် အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရမလိုပင် ဖြစ်ပါသည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ရေးလ်တက္ကသိုလ်(Yale University) မှကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ချို့သည် မိမိ ကိုယ်ကို မှန်ထဲတွင် ပြန်လည်မှတ်မိနိုင်သော နီကိုဟုခေါ်သည့် လူသားဆန်သော စက်ရုပ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
နီကိုသည် ခန္ဓ္ဓာကိုယ်အပေါ်ပိုင်းသာပါရှိသည့် လူသားဆန်သည့် စက်ရုပ်ဖြစ်ပါသည်။ နီကိုအား ယေးလ်တက္ကသိုလ် ကွန်ပျူတာဌာန ဘရိန်းစကာဆယ်လတီ၏ လက်အောက်ခံ လူမှုစက်ရုပ်သုတေသန ဌာနမှ ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ နီကိုသည် ၎င်း၏ အရိပ်အား သိရှိနိုင်သည့် ပထမဆုံးသော လူသားဆန်သည့် စက်ရုပ် ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းစက်ရုပ်ကို မြင်ကွင်းအတွက် အကျဉ်း၊ အကျယ် ကြည့်နိုင်ရန် ကင်မရာနှစ်လုံး တပ်ဆင်ထားပြီး လက်နှစ်ဖက်နှင့် ခေါင်းအပါအ၀င် လူခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ စကား ပြောသံများအား မှတ်မိရန်အတွက် ၎င်းကိုယ်ပေါ်တွင် စကားပြောကိရိယာအား တပ်ဆင်ထားပါသည်။ ၎င်းစက်ရုပ်သည် ၂၂ ဒီဂရီ ကောင်းမွန်စွာ လှုပ်ရှားနိုင်ပါသည်။ နီကိုတွင် ပုံရိပ်ဖမ်းယူခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် အခြားလုပ်ငန်းတာဝန်များအတွက် ကွန်ပျူတာ ၁၆ လုံး အသုံးပြုထားပါသည်။ နီကို၌ မှန်ထဲတွင် လှုပ်ရှား မှုနှင့် မိမိလှုပ်ရှားမှုအား နှိုင်းယှဉ်သိရှိနိုင်ရန် ပရိုဂရမ်ရေးဆွဲထားပါသည်။ အကယ်၍ နီကို၏ ကိုယ်ပိုင်လက် တစ်ဖက်သည် လှုပ်ရှားနေပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာပင် မှန်ထဲ၌ လက်တစ်ဖက် လှုပ်ရှားနေသည်ကိုတွေ့ မြင်ရလျှင် နီကိုအနေဖြင့် ၎င်းလှုပ်ရှားမှုအား မိမိလက် လှုပ်ရှားမှု ဟုတ်မဟုတ်ကို ဆုံးဖြတ်ပေလိမ့်မည် ဖြစ် ပါသည်။ ထိုအရာသည် အံ့သြဖွယ်ရာ ကောင်းသည့် စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
ပထမဦးစွာ နီကို၏ အာရုံခံစနစ်သည် လူပ်ရှားမှု အချက်အလက်များအား ထောက်လှမ်းပါသည်။ ထို့နောက် ၎င်းလှုပ်ရှားမှုအား ကင်မရာမှပုံရိပ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။ အကယ်၍ အာရုံခံစနစ်နှင့် ပုံရိပ်တို့ ထပ်တူကျပါက နီကိုအနေဖြင့် ၎င်း၏အရိပ်ဖြစ်ကြောင်း ယူဆပေလိမ့်မည်။ နီကိုအနေဖြင့် လက်လှုပ် ရှားမှုအား မတွေ့ရသည့်အခါ ၎င်းအရာသည် အခြားစက်ရုပ်တစ်ရုပ်ဖြစ်သည်ဟု ယူဆပါမည်။
ယခုကဲ့သို့ အစီအမံများကို ရရှိအောင် သုတေသန ပြုလုပ်သူများအနေဖြင့် အထူးပင် ကြိုးစားခဲ့ကြ ရပါသည်။ စက်ရုပ်အနေဖြင့် မိမိ၏ခန္ဒာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအား သိရှိရန်၊ သက်ရှိသက်မဲ့အား ခွဲခြား သိရှိရန်၊ အခြားသောသူများ၏ စူးစိုက်ကြည့်ရှုခြင်းကို သိရှိအာရုံခံနိုင်ရန်၊ အရာဝတ္ထုများအား စူးစိုက်ကြည့်ရှု ရန်၊ ကိုယ်နေဟန်ထားများအား မှတ်မိရန်၊ ခန္ဓာဗေဒဘာသာစကားအား နားလည်ရန် အစရှိသည်များအား ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါသည်။
န်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တစ်ချို့သည် မိမိ ကိုယ်ကို မှန်ထဲတွင် ပြန်လည်မှတ်မိနိုင်သော နီကိုဟုခေါ်သည့် လူသားဆန်သော စက်ရုပ်တစ်မျိုးကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။
Absolute Boyfriend လို စိတ်ကြိုက်စက်ရုပ် ချစ်သူ ထားနိုင်တဲ့ ခေတ်သိပ်မလိုတော့ဘူးထင်တယ်။
သတင်းကို ဝေမျှ ဘာသာပြန်ပေးလို့ ရှဲရှဲပါ
နောက် လာမယ့် ….
ခရစ်သက္ကရာဇ် … ၂၀၅၀ မှာ …
စက်ရုံတွေကို စစ်ပြေမြင် လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့ ….
မိုးပျံ၊ ရေဆန်၊ ခြေမြန်၊ ရာသီဒဏ် ခံနိုင်တဲ့ စက်ရုပ်များကို
မဟာရာဂျာ ကုမ္ပဏီ လီမိတက်မှ တီထွင် စမ်းသပ်နေကြောင်းလည်း …
သတင်း ရရှိသည် ……….။